လွမ်းရခက်ပေမယ့် တမ်းတလျက်ပါ – Grab Love Story
by phyu June 16, 2021
ဆောင်းဦးလေနုအေးတို့သွေးနေပြီ .. နှင်းမြူတို့က လွင့်ပျံပြီး ဦးချမ်းသာအောင်၏ မျက်နှာကို တိုးဝှေ့ လာသည်.. လက်ကျန်အရက်ခွက်ကို တစ်ငုံသောက်လိုက်ပြီး နှင်းလေအေး၏ ကျီစယ်မှုကို ခံယူလိုက်ရာ အတွေးများက လွန်ခဲ့သော တစ်နှစ်ခန့်ကို ရောက်သွားလေသည် ..။
“ကိုကို.. အဆုံးစွန်ထိ လုပ်တော့မလို့လား”
အဝတ်မဲ့ခန္ဓာကိုယ်နှစ်ခု ပေါင်းစုံဖို့အတွက် ကြိုးပမ်းနေသော နှစ်ဦးစလုံးမှာ ရမက်၏ လောက်မြိုက်မှုကြောင့် မောပန်းနေကြသည်.. ။
“အင်း.. သဲ .. ကို အဆုံးစွန်ထိ ဖြစ်ချင်နေပြီ .. ခနလေးပဲ သည်းခံပေးနော် .. “
“ကိုကိုရယ် .. သဲ ကိုကို့ကို ဒီလောက်လိုက်လျောတာတောင်လွန်နေပြီ ..မလုပ်ပါနဲ့နော် .. “
“မရတော့ဘူး သဲ .. ဖြစ်ချင်ရာဖြစ်တော့ “
လျှပ်စစ်ဓာတ်ပါသော အင်္ဂါနှစ်ခု၏ ထိတွေ့မှုမှာ မိန်းမောပြီး ငြင်းဆန်အားတွေပျောက်ဆုံးကုန်ကြပြီ ..။
လူ့ကျင့်ဝတ်စည်းကို တက်ညီလက်ညီဖောက်ဖျက်နေသော လူသားနှစ်ဦး၏ ပန်းတိုင်မှာ မှုန်ပြလျက် ..
” အာ့.. ကိုကို .. သဲ အောင့်ပြီး နာတယ် “
” သဲ စိတ်ကိုလျော့ထား .. “
“အီး .. ကိုကိုရယ် .. တမျိုးကြီးပဲ “
“ကောင်းလား.. သဲ .. ကိုကိုတော့ အရမ်းကောင်းတယ် “
သူမထံမှ အဖြေပြန်မရပဲ နှုတ်ခမ်းနှစ်ခု ဂဟေဆက်သွားပြီ အနမ်းတွေက ပြင်းထန်လာသည် .။
လှုံ့ဆော်မှုရဲ့ အစွန်းဆုံးကို မတက်လှမ်းမီ သူမကိုပါ အပါခေါ်နိုင်ရန် အရှိန်ကို လျော့ချလိုက်ပြီး သူမ၏ ပြည့်တင်းလုံးဝန်းသော ရင်သားများကို လက်ဖြင့် အသာအယာဆော့ကစားလိုက်သည်.. ။
ထို့နောက် သူမ၏ ပန်းသွေးရောင် နို့သီးခေါင်းလေးကို အသာအယာ ကိုက်ယူလိုက်ရာ ..
“အား .. ကိုကိုရယ်.. သဲရင်ထဲတမျိုးကြီးပဲ “
နို့သီးခေါင်းလေးတွေကို တဖက်ပြီး တဖက်ပြောင်းစို့ကာ အရှိန်ကို ပြန်မြင့်လိုက်ပြီး ပန်းတိုင်ဆီသို့ ကူးခတ်နိုင်ရန် ကြိုးပမ်းလိုက်သည်..။
” အင့်.. အာ့ ကိုကို.. မြန်မြန်လေး .. သဲ ပြီးး.. ပြီးတော့မယ် “
“အင့် .. ကိုကိုလဲ ပြီးတော့မယ် “
နို့သီးခေါင်းလေးဆီမှ လျှာကို သူမ နှုတ်ခမ်းဆီသို့ ပြန်ပို့ပေးလိုက်ပြီး အင်္ဂါနှစ်ခု၏ အရှိန်နှင့်အတူ လျှာနှစ်ခု၏ တိုက်ပွဲမှာလဲ ပြင်းထန်လာသည်..။
အသက်ရှူသံတွေက ပန်းတိုင်ကို လမ်းပြနေသကဲ့ ရှိသမျှအားအင်ကို ခါးဆီသို့ ပို့ဆောင်ပြီး အရှိန်အဟုန်ဖြင့် လှော်ခတ်လိုက်သည် .။.
ပေါက်ကွဲထွက်လာသော ဖိုဓာတ်များက မဓာတ်များဖြင့် ထိတွေ့ခွင့်ရသောအခါ ..
” အင်း.. အာ့ ကိုကိုရယ် … ကောင်းလိုက်တာ .. အရမ်းကြမ်းတာပဲ “
“ကိုကိုလဲ အရမ်းကောင်းသွားတယ် သဲ… နာနေသေးလား “
“ဘယ်အချိန်ကထဲက အနာပျောက်သွားမှန်းတောင် မသိတော့ပါဘူး ကိုကိုရယ် “
ခန္ဓာကိုယ်နှစ်ခုအပေါ် အပြန်အလှန်ပြေးလွှားနေသော လက်အစုံတို့က ရှေ့ဆက်မည့်လမ်းအတွက် အားအင်တွေ ဖြစ်လေမည်လား .. နှုတ်ခမ်းချင်း အတန်ကြာထိတွေ့ပြီးနောက်
“ကိုကို .. သဲတို့အရမ်းမှားသွားပြီ “
” သဲ နောင်တရလို့လား “
” မရချင်တော့ဘူး ကိုကိုရယ် .. ထပ်ချစ်ချင်တာပဲ သိတော့တယ် “
စကားအဆုံးမှာတော့ တငွေ့ငွေ့လောင်ကျွမ်းလျက်ရှိသော ရမက်မီးက ပြန်လည်တောက်လောင်လာပြီး အဝတ်မဲ့လူသားနှစ်ဦးတို့မှ ပြန်လည်ငြိမ်းသက်ရန် ကြိုးစားကြပြန်သည် .။
ငြီးငြူသံ၊ ပင့်သက်ရှိုက်သံ နှင့် အသားချင်းထိတွေ့သံများက အခန်းငယ်အတွင်း ပြန်လည်ထွက်ပေါ်လာသည်..
လေနုအေးတစ်ချက်အသုတ်တွင် အတိတ်ကို အလည်အပတ်သွားနေသော ဦးချမ်းသာအောင်၏ စိတ်အစဉ်က ပစ္စုပ္ပန်​သို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိလာပြီ လက်ထဲရှိ အရက်ခွက်ကို တကျိုက်ထဲ အကုန်မော့သောက်လိုက်သည်။
“ဟက် .. “
သူ့အကျင့်အတိုင်းလှောင်သလို တချက်ရယ်လိုက်မိပြီး ဆေးလိပ်ဗူးထဲမှ ဆေးလိပ်တစ်လိပ်ကို ထုတ်၍ မီးညှိကာ ခပ်ကြမ်းကြမ်းတချက်ရှိုက်သွင်းလိုက်သည်။
ပြန်လည်မှုတ်ထုတ်လိုက်သော မီးခိုးငွေ့များနှင့်အတူ သူ၏စိတ်သည်လဲ
အတိတ်ဆီသို့ ပြန်လည်လွင့်ပျံသွားပြန်ပြီ ။”ကဲ အားလုံးပဲ .. သူကတော့ ကျွန်တော်နဲ့ handover လုပ်မယ့် ဦးစီးမှူးအသစ် ဦးချမ်းသာအောင်တဲ့ .. သူက ရုံးချုပ်ကနေပြီးတော့ promotion နဲ့ဆင်းလာတာ .. ရုံးလုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာတွေ အရမ်းတော်တယ်.. ကိုချမ်းသာအောင် ဘာပြောဦးမလဲ “
“ထူးထူးထွေထွေတော့ ပြောစရာမရှိသေးပါဘူး .. handover ပြီးမှ အစည်းအ​ဝေးအကျဉ်းလေးတစ်ခုလောက် လုပ်တာပေါ့.. ရုံးအုပ်ကြီးကတော့ ဝန်ထမ်းအားလုံးရဲ့ ကိုယ်ရေးရာဇဝင်လေးတွေပြုစုပေး .. ကျန်တာတော့ မရှိပါဘူး “
“ကဲ.. ဒါဆိုလဲ အားလုံးပဲ ဦးစီးမှူးအသစ်ရဲ့ arrival ကော်ဖီနဲ့မုန့်လေး စားကြဗျာ “
လုပ်စရာရှိတဲ့ လွှဲပြောင်းကိစ္စတွေ၊ ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ အခြေအနေတွေ ပြောဆိုပြီး
“ကိုချမ်း Golf ရိုက်လား”
“ရိုက်တယ် အကိုကြီး .. မရိုက်တာတော့ ကြာပြီ”
“ဒါဆိုလဲ ညနေ ကွင်းပတ်ရအောင် .. ကျွန်တော်လဲ partner တွေကို ချိတ်လိုက်မယ်”
ညနေ ဂေါက်ကွင်းထဲရောက်တော့ ဦးစီးမှူးအဟောင်း ဦးသန့်ဇင်မောင် မိတ်ဆက်ပေးတဲ့ ဆည်မြောင်းက ဝန်ထောက်ကြီးနဲ့ အခြားဌာနတစ်ခုက အရာရှိတစ်ဦးနဲ့ အတူ golf ရိုက်ဖြစ်သည်.. ဝန်ထောက်ကြီးက လူပျော်တစ်ယောက် .. ကျွန်တော့်နားကိုကပ်ပြီး
“ကိုချမ်း .. ကိုသန့်ဇင်ဆီက အမွေတောင်းပြီးပြီလား”
“ဗျာ .. ဘာအမွေတုန်း”
“သူ့ carry မလေးကိုလေဗျာ”
သူပြောမှ သတိထားကြည့်မိသည် .. ဦးသန့်ဇင်မောင်ရဲ့ carry မလေးက ရုပ်အချောကြီးမဟုတ်ပေမယ့် အရပ် ၅ ပေ ၄ လောက်နဲ့ ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက်တောင့်တောင်းတင်းတင်း .. ပုရိသတွေကို ဆွဲဆောင်နိုင်မယ့် အရည်အချင်းကောင်းများကို ပိုင်ဆိုင်ထားသူမှန်းသိသာလှသည်..
“မလုပ်ပါနဲ့ဗျာ.. ကြိုက်မှန်းမသိ .. မကြိုက်မှန်းမသိ”
“ကြိုက်ပါတယ်ဗျ.. ကြိုက်ပါတယ် .. ဟား..ဟား”
ဝန်ထောက်ကြီးရဲ့စကား ဆိုလိုရင်းကို နားမလည်လိုက်ပဲ မိမိ
putter ပတ်ရမည့်အလှည့်ရောက်သဖြင့် ဂေါက်သီးအပေါ်ပြန်ပြီး အာရုံထားလိုက်သည်။
1 Corner ပတ်ပြီး ဂေါက်ကလပ်တွင် အချိန်ခဏဖြုန်းကာ ဘီယာသောက်ရန် ဝန်ထောက်ကြီးက မဲဆွယ်သဖြင့် ဝိုင်းဖြစ်ကြသည်။
ဦးချမ်းသာအောင်က ဦးသန့်ဇင်မောင်ကို ” အကိုကြီး မသောက်ဖူးလား” ဟုမေးလိုက်ရာ ဦးသန့်ဇင်မောင်က မဖြေမီ ဝန်ထောက်ကြီးက
“ကိုသန့်စင်က မသောက်ဖူးဗျ.. သူကတစ်လိုင်းထဲပဲ .. ကျွန်တော်တို့လို လိုင်းမစုံဘူး.. လိုင်းမပူးဘူးဗျ.. ဟားဟား” ဟု ဝင်ဖြေလိုက်သည်..
“အကိုကြီး .. သမီးပြီးပြီ “
အသံကြားလို့ လှည့်ကြည့်လိုက်ရာ ဦးသန့်ဇင်မောင်ရဲ့ carry မလေး.. ခြေလက်မျက်နှာဆေးပြီး ​ဆေးဆိုးပန်းရိုက်​အနည်းငယ် လုပ်လာတဲ့ပုံ ..
“ကဲဗျာ .. အားလုံးပဲ .. ကျွန်တော်ပြန်လိုက်ဦးမယ်”
“ဟုတ်ပါပြီဗျာ .. ပြန်ပါ .. ပြန်ပါ .. ဟဲ့ နွယ်နီ .. နင့်ဆရာညောင်းနေပြီနော် .. အကြောလျော့ပေးလိုက်ဦးဟ..ပြီးတော့ နင်လဲမနက်ဖြန် carry မလိုက်နိုင်ပဲ နေဦးမယ် ” ဟု ဝန်ထောက်ကြီးက နောက်လိုက်ရာ carry မလေးက
“ဦးအောင်မြတ်ကြီးနော် .. သမီးက အကိုကြီးကို မုန့်လိုက်ကျွေးခိုင်းမလို့ တူတူပြန်တာပါ “
“အေး.အေး.. မုန့်လဲကျွေးခိုင်း.. ကျန်တာလဲ ကျွေးခိုင်းပေါ့ဟာ..ဟားဟား”
“ကဲပါ ဝန်ထောက်ကြီးရယ် .. နောက်မနေပါနဲ့တော့ဗျာ.. သွားလိုက်ဦးမယ်.. “
“ဟုတ်ပါပြီဗျာ .. အချိန်က အရေးကြီးတယ်မလား.. သွားပါဗျာ.. သွားပါ”
အဲ့ဒီကျမှ ဝန်ထောက်ကြီး ကိုအောင်မြတ်ရဲ့ ကြိုက်ပါတယ်ဗျာ ဆိုတဲ့စကားကို နားလည်မိတော့သည်။ ဝိုင်းသိမ်းတော့ ကိုအောင်မြတ်က “ကိုချမ်း ဘာရှိသေးလဲ .. အားရင် သီချင်းလေးဘာလေး သွားဆိုရအောင်”
“ရေတော့ချိုးချင်သေးတယ် .. ချွေးတွေနဲ့ ငြီးစီစီဖြစ်နေပြီ”
“ဒီလိုလုပ်ဗျာ .. ကျွန်တော်နဲ့လိုက်ခဲ့လိုက် .. ကျွန်တော့် Guest House မှာ ရေဝင်ချိုးလိုက်ဗျာ .. ဒါနဲ့ ကိုချမ်းကားထဲမှာ အဝတ်အစားပါတယ်မလား”
ဦးချမ်းသာအောင်လဲ ပြန်ဖြေမနေတော့ပဲ လက်ကျန်ခွက်ကိုဖြတ်လိုက်ပြီး ထရပ်လိုက်သည်။
ကိုအောင်မြတ်၏ စီစဉ်မှုဖြင့် မြို့စွန်ရှိ KTV တစ်ခုသို့ရောက်ရှိခဲ့သည် .. ထုံးစံအတိုင်းကောင်မလေးတွေခေါ် သီချင်းဆိုရင်း ဆက်သောက်ဖြစ်ကြသည်။ ကိုအောင်မြတ်ကတော့ လာနေကျဖြစ်မည်ထင် .. သီချင်းတောင် ကောင်းကောင်းမဆိုတော့ပဲ သူ့ကောင်မလေးနှင့် ချောင်ကပ်သွားပြီဖြစ်သည်။ ခနကြာတော့ ကိုအောင်မြတ်က waiter တစ်ယောက်ကို ခေါ်ပြီး အခန်းတစ်ခန်းထပ်ယူရန်ပြောနေသည်။
“ကိုချမ်းရေ .. ဆောရီးဗျာ .. ကျွန်တော် ဟိုဘက်ခန်းခနသွားလိုက်ဦးမယ်.. ကိုချမ်း ဆက်ဆိုလိုက်ဦးဗျာ .. သမီး.. နင့်ဦးကို လိုတာလုပ်ပေးနော် .. မှာစရာရှိတာလဲမှာ .. ရတယ်”
ဦးချမ်းသာအောင်လဲ ဘာမှပြောမနေတော့ပဲ တချက်ပြုံးပြပြီး ဆေးလိပ်တစ်လိပ်ထုတ်သောက်နေသည်။
“ဦးသောက်ဦးမလား .. ပြီးတော့ ဘာသီချင်းထည့်ပေးရမလဲ”
“ရတယ် .. သီချင်းပဲဖွင့်ထားလိုက်”
ထို့နောက် သူမ၏ ပုခုံးကို လှမ်းဖက်လိုက်သည် .. ကောင်မလေးကြည့်ရတာ ပုရိသမနောကို နားလည်ဟန်ဖြင့် ဦးချမ်းသာအောင် အနားတိုးကာ ရင်ခွင်ထဲသို့ရောက်လာသည်။ ဘာစကားတစ်ခွန်းမှ မပြောဖြစ်ပဲ ဆေးလိပ်ဆက်သောက်နေမိသည်.. အချိန်အနည်းငယ် ထိုင်နေပြီးနောက် သူမ၏လက်တွေက ဦးချမ်းသာအောင်၏ရင်ဘတ်ကို ဖွဖွလေးပွတ်ပေးနေသည်။
“ဦး .. ” ခေါင်းလေးကို အသာမော့ကာ နားရွက်နားသို့ကပ်ခေါ်သံကြောင့် လေနွေးနွေးလေးတစ်ခု နားရွက်အနားမှဖြတ်တိုက်သွားခဲ့သည်..
“ဦး .. နေချင်လား”
သူမမျက်နှာကို တစ်ချက်ကြည့်လိုက်ရာ ..
“သမီးက လူတိုင်းကို လက်မခံပါဘူး “
မလိုအပ်တဲ့ရှင်းပြချက်တွေကို နားမထောင်လို၍ “သမီးကို ဦး မုန့်ဖိုးဘယ်လောက်ပေးရမလဲ” ဟုမေးလိုက်သည်..
သူမမျက်လုံးဆီမှ နားလည်လိုက်တဲ့ အရောင်လေးတစ်ချက်လင်းလာပြီး “ဦး ဖာသာပဲပေးပါ .. သမီးမတောင်းတတ်ဘူး.. အမြဲလဲလုပ်တာမဟုတ်ဘူးလေ “
သူမကို ဖက်ထားသောလက်ကို ဖြေလွှတ်ပြီး ပိုက်ဆံအိတ်ထဲမှ တစ်သောင်းတန် ၅ ရွက် ထုတ်ပေးလိုက်သည်။ သူမ မမျှော်လင့်ထားသောပုံဖြင့် ဦးချမ်းသာအောင်ကို တစ်ချက်ကြည့်ပြီး ” ခနနော် ဦး.. သမီး ကွန်ဒုံးသွားယူလိုက်ဦးမယ်” ဟုပြောကာထွက်သွားသည်..
ဦးချမ်းသာအောင် လဲ အရက်တစ်ခွက်ငှဲ့ကာ တစ်ငုံသောက်လိုက်သည်။ ထို့နောက် WC ထဲဝင်ကာ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပြီး လက်ကျန်အရက်ခွက်ကို တမျဉ်းမျဉ်းသောက်ရင်း စောင့်နေမိသည်..
ခနကြာတော့ သူမပြန်ဝင်လာပြီး တံခါးကို lock ချကာ တစ်ရူးစက္ကူကို ဆွဲထုတ်ပြီး အနည်းငယ်လုံး၍ ချောင်းကြည့်ပေါက်ကိုပါ ပိတ်လိုက်သည်။ ထို့နောက် သီချင်းသံကို အနည်းငယ်ကျယ်လိုက်ပြီး တီဗွီနှင့်မီးကိုပါပိတ်လိုက်သည်..
ထို့နောက်ဦးချမ်းသာအောင်ဘေးတွင် ဝင်ထိုင်ပြီး “ဦး ဆက်ရှင်ထပ်ယူဦးမယ်မလား” ဟု မေးသည် .. ကျွန်တော်က ခေါင်းညှိတ်ပြလိုက်ရာ သူမက ရယ်ပြုံးပြုံးလေးဖြင့် လက်လေးနှစ်ချောင်းထောင်ပြသည် ..
ခုမှသေချာကြည့်မိသည် .. သူမ ကိုရီးယားတီရှပ်ခပ်ပွပွနှင့် စကပ်တိုတစ်ထည်ကို လဲလာခဲ့သည်..
သူမတီရှပ်အောက်မှ လက်ကိုထိုးထည့်ပြီး ဗိုက်သားလေးကို ခပ်ဖွဖွပွတ်ပေးနေမိသည်.. သူမရဲ့လက်တစ်ဖက်က ဦးချမ်းသာအောင်ခါးနောက်ကနေ သိုင်းဖက်လိုက်ပြီး ကျန်တစ်ဖက်က ကျွန်တော့ပေါင်ကို ပွတ်နေသည် ..
စိတ်ဆန္ဒ၏ ထကြွမှုကို လွန်ဆန်လေ့မရှိသော ခန္တာကိုယ်၏ ပြောင်းလဲမှုနှင့်အတူ လက်တွေက သူမ ရင်သားဆီသို့ အသာအယာတက်လှမ်းသွားခဲ့သည် .. သူမ၏ ဘရာစီယာလေးကို အသာလှပ်တင်လိုက်ရာ နွေးထွေးသော ရင်သားတစ်စုံနှင့် နို့သီးခေါင်းသေးသေးလေးတစ်ခုကို စမ်းမိသည်..
လက်ညိုးနှင့်လက်မနှစ်ခု၏ တိုက်စစ်ကြောင့် သူမ၏ ခန္တာကိုယ်တစ်ချက်ယိုင်သွားခဲ့ပြီး ဦးချမ်းသာအောင်၏လက်ကို ဆွဲထုတ်လိုက်သည်.. ထို့နောက် ဦးချမ်းသာအောင်၏ပုဆိုးကို ဖြေလိုက်ပြီး သူမလက်တစ်ဖက်တိုးဝင်လာခဲ့တော့သည်။
ဦးချမ်းသာအောင်ကလဲ သူ၏အတွင်းခံဘောင်းဘီကို ချွတ်ပေးလိုက်ပြီး သူမလက်ဆီမှ ကူးပြောင်းလာသော လျှပ်စစ်စီးကြောင့်တစ်ခုကြောင့် မိန်းမောနေစဉ်
ခေါင်းကို အသာအယာညှိတ်ပြပြီး ခန္တာကိုယ်ကို အနေအထားပြင်ပေးလိုက်သည်..
~ ၄ ~
သူမနှုတ်ခမ်းဖျားမှတစ်ဆင့် ထိတွေ့နေသော အာရုံတစ်ခုကို နောက်ယောင်ခံလိုက်ရင်း စိတ်ဆန္ဒ၏ ပြင်းပြမှုသည် အထွဋ်အထိပ်သို့ ရောက်ရှိလာသည်။ သို့သော်ပန်းတိုင်ဆီသို့ကာ အလှမ်းဝေးဆဲ ..
ထင်မထားရလောက်အောင် သူမ၏ ပြုစုမှုမှာ ကျွမ်းကျင်လှပြီး နူးညံ့လွန်းသည်။ သူမနှုတ်ခမ်းနှင့်အရေပြားတစ်ခု ကွဲကွာသွားချိန်တွင် မျက်စိကို အသာအယာဖွင့်ကြည့်လိုက်သည်။
“လုပ်ရအောင် ဦး .. သမီးလဲ ဖြစ်လာပြီ”
ထိုင်လျက်အနေအထားဖြင့် ထိတွေ့မှုတစ်ခုကို သူမက ဦးဆောင်စဉ် ပြင်းပြနေသော စိတ်အဟုန်ဖြင့် စည်းချက်ညီညီပင့်ပေးနေမိသည်။
ခန္တာကိုယ်နှစ်ခုကို ခွဲခွာခွင့်မပြုနိုင်အောင် ကောင်းလွန်းလှသည့် တင်းကျပ်နွေးထွေးသောအရာတစ်ခုကြောင့် သူမခါးကို ခပ်တင်းတင်းဖက်ပြီး ဘေးကိုဆွဲလှဲလိုက်သည်.. ထို့နောက် ပြင်းထန်သောဆန္ဒလှိုင်းတပိုးရိုက်ချက်များက ခန္တာကိုယ်နှစ်ခုကို ထိတွေနေသည်..
“ရှီး ကောင်းလိုက်တာ ဦးရယ် .. အင့် .. အား ပြင်းပြင်းလေး .. အား ..အိ”
မီးလောင်ရာကို ပင့်တိုက်လေသော သူမနှုတ်ခမ်းအစုံမှထွက်ပေါ်လာသောလေကြောင့် အင်အားများကို တစ်နေရာထဲ စုစည်းပြီး လောင်ကျွမ်းလိုက်သည်.. သူမက အောက်နှုတ်ခမ်းကို ကိုက်ထားပြီး မျက်စိမှိတ်ကာ လွင့်မျောနေသည်..
ရုတ်တရက် ဦးချမ်းသာအောင်၏ရင်ဘတ်ကို တချက်အသာတွန်းလိုက်ပြီး “ဦး သမီးလေးဖက်ထောက်ပေးမယ် အဲ့လိုပုံစံ လုပ်ပေး” ..
နားလည်မှုရရှိပြီးသားလူသားနှစ်ဦးအတွက် ခရီးတစ်ထောက်နားချိန်သည် ခနတာ.. မပြီးသေးသောခရီးကို ဆက်ရန်အတွက် ပထမခြေလှမ်းကို စတင်လိုက်ရာ ..
“အား .. အောင့်တယ် ဦး .. ခနလေး.. ခနလေး “
ဆက်လျှောက်မည့် ခြေလှမ်းကို ခနရပ်တန့်လိုက်ပြီး သူမကို ပြင်ဆင်ချိန်ပေးလိုက်သည်။
“ရပြီ ဦး .. ပြန်ထည့်ကြည့်တော့” ခြေလှမ်းများကို ဖြည်းဖြည်းချင်းလှမ်းလျှောက်လာခဲ့ရာ သူမလဲ အဆင်ပြေသည့်ပုံပင်
လက်အစုံက သူမ၏ တင်ပါး ရင်သားနှင့် ခါးဆီသို့ အစုန်အဆန်ပြေးလွှားပွတ်သပ်ကျီစယ်နေမိသည်။
သူမ၏ မျက်နှာက ဦးချမ်းသာအောင်ဆီသို့ လှည့်လာပြီး အောက်နှုတ်ခမ်းကို ကိုက်ထားသော လေသံဖြင့်
“ဦး . အ့.. ဦး.. လုပ်.. လုပ်.. မြန်မြန် လုပ်.. ကောင်းတယ် ဦး .. အား.. ရှီး… အ့”
သူမ၏ စကားသံလေးတစ်ခွန်းကြောင့် တွန်ကျူးမြည်ဟီးလာသည့် အသက်ရူသံပြင်းပြင်းဖြင့် ခရီးအဆုံးပန်းတိုင်ကို မြင်နေရသည့် ပုရိသယောကျား၏ တက်ကြွသော အားမာန်​ကြောင့် ပြင်းထန်သော လှိုင်းတံပိုးများက လူသားနှစ်ဦးကို ဖုံးလွှမ်းနေသည်..
“အာ့ .. အီး .. ကောင်းတယ်.. သမီးကြိုက်တယ် .. ကြမ်းပါဦး.. ရှီး .. အား .. ဆောင့်ပေး.. “
ရမ္မက်ဖုံးလွှမ်းနေသော လူသားနှစ်ဦးသည် အလဲထိုးသတ်ကြမည့် ကြိုးဝိုင်းအတွင်းမှ လူသားများအဖြစ်ပြောင်းလဲလာပြီး လစ်ကွက် ဟာကွက်များကို အပြိုင်တိုက်စစ်ဆင်နေကြသည်..
“အာ့.. ဦးပြီးတော့မယ် .. “
“ဦး…. ကြမ်းကြမ်းကြီး လုပ်ပေး .. ရှီး သမီးလဲ ကောင်းတယ် .. အား.. အီး..”
ပြင်းထန်မြန်ဆန်သော ခြေလှမ်းများကြောင့် ခရီးအဆုံးပန်းတိုင်ကို ရောက်ရှိသွားခဲ့ပြီ.. အလွှာတစ်ခု၏ ခြားထားမှုကြောင့် ဖိုဓာတ်နှင့် မဓာတ် တိုက်ရိုက်ထိတွေ့ခွင့်မရသော်လဲ ခံစားနိုင်ကြသည်..
ပန်းအဝင် စိတ်ကိုလျော့ချလိုက်သော လူသားနှစ်ဦး အရုပ်ကြိုးပြတ် ထပ်လျက်ပြုတ်ကျသွားသည်.. အချိန်အနည်းငယ် အနားယူပြီးနောက် ..
အသက်ကို အဝရူလိုက်ပြီး သူမပေါ်မှ ဖယ်ကာ အဝတ်အစားကို သပ်​သပ်​ရပ်​ရပ်​ဖြစ်အောင် ပြန်ပြင်ပြီး ထိုင်နေမိသည်.. အရက်ခွက်ထဲက ရေခဲများက လူသားနှစ်ဦး၏ အပူကြောင့်လားမသိ.. အရည်ပျော်ကုန်ပြီ..
သူမက ဘေးနားဝင်ထိုင်ပြီး စကားတွေပြောနေသော်လဲ ခေါင်းညှိတ်ခေါင်းခါမှလွှဲပြီး မတုံပြန်မိ..
“ဦး .. ဦး “
“အဲ့ဒါဆို အားမွေးထားနော် .. သမီး WC “ခနဝင်လိုက်ဦးမယ်.. တစ်ခုကျန်သေးတယ် ဟိ”
ကောင်မလေးက ပြောင်စပ်စပ်ဖြင့် ပြောပြီး ဦးချမ်းသာအောင်၏ပါးကို တချက်ညှစ်ကာ WC ထဲ ဝင်သွားသည်။
ထို့နောက် စိတ်ကူးထဲတွင်ပေါ်လာသော သီချင်းတစ်ပုဒ်ကို ကိုယ်တိုင်ထည့်ပြီး ဆိုနေလိုက်သည်။ သီချင်းထဲကို အာရုံထည့်လိုက်သဖြင့် ကောင်မလေးကိုလဲ ခနမေ့သွားသည်..
“ဖြောင်း..ဖြောင်း..ဖြောင်း..ဖြောင်း.. ဦး သီချင်းဆိုတာလဲ ကောင်းတာပဲ .. ဟိ”
ကောင်မလေးက ဦးချမ်းသာအောင်ဘေးတွင်ဝင်ထိုင်ကာ ကုန်နေသောအရက်ခွက်ထဲသို့ အရက်နှင့်ရေခဲ စပ်ထည့်ပေးသည်.. ထို့နောက် ဦးချမ်းသာအောင်ကို ကမ်းပေးပြီး သူ့ခွက်ထဲသို့ SPY အနည်းငယ် ငှဲ့ထည့်လိုက်သည်..
” ဦး .. C H E E R”
ဖန်ခွက်နှစ်ခု တေ့ထိမိပြီး တစ်ငုံစီငုံလိုက်ကြသည်..
သူမက အနားတိုးလာပြီး ရင်ခွင်ထဲသို့ ဝင်လာခဲ့သည်။ ဦးချမ်းသာအောင်၏ ရင်ဘတ်ကို အသာအယာ ပွတ်နေရာမှ နှုတ်ခမ်းချင်းနီးကပ်လာသည်.. ဦးချမ်းသာအောင်က ဦးခေါင်းကိုငဲ့ရှောင်လိုက်ပြီး သူမ၏ နားရွက်ကလေးကို လျှာဖျားလေးဖြင့် အသာအယာထိတွေ့ကစားလိုက်သည်။
“အ့.. ဦးယားတယ်.. “
ဦးချမ်းသာအောင်က သူမ၏ တီရှပ်ခပ်ပွပွကို ခေါင်းပေါ်မှ ချွတ်ယူရန် မတင်လိုက်ရာ
“ဟိတ်.. ဦး.. ချွတ်လို့မရဘူး.. ဒီတိုင်းပဲလှန်ပေးမယ်လေနော်”
ဦးချမ်းသာအောင်၏ လက်နှစ်ဖက်နှင့် နှုတ်ခမ်းတို့က သူမ၏ ရင်သားများနှင့် နို့သီးခေါင်းလေးတွေကို အစုန်အဆန် တိုက်စစ်ဆင်နေစဉ် သူမ၏ လက်တစ်ဖက်က ဦးချမ်းသာအောင်၏ ပုဆိုးကြားထဲဝင်လာခဲ့တော့သည်..
“ဦး.. နော်.. ခနလေးပဲ နားရသေးတယ် ပြန်ဖြစ်နေပြန်ပြီ အာ့ ..”
သူမ၏ စကားမဆုံးခင် ဦးချမ်းသာအောင်က သူမကို ဆွဲလှဲလိုက်သည်..
လက်ကျန်တစ်ခုအတွက် ရေအစုန်မှာမျောကြသော လူသားနှစ်ဦး၏ ထိတွေ့မှုမှာ ကြမ်းတမ်းကြာမြင့်လှသည်.. သူမ၏ တောင်းဆိုမှုနှင် ဦးချမ်းသာအောင်၏ ဖြည့်ဆည်းမှုတို့ကြောင့် အခန်းငယ်လေးအတွင်း တိုက်ခတ်နေသော မုန်းတိုင်းငယ်မှာ ကြမ်းတမ်းလွန်းသည်.. နှစ်ဦးသား၏ ကျေနပ်မှုအထွဋ်အထိပ်ကို ရောက်ချိန်တွင် တစ်ဦးကိုတစ်ဦး နားလည်စွာ ပြုံးပြမိသည်..
“ဦးရယ် အရမ်းကောင်းတာပဲ .. တကယ် လုပ်နိုင်တယ်နော်.. “
မနက်လင်းခါနီး ကိုအောင်မြတ်က “ကိုချမ်းရေ ပြန်ရအောင်” ဟု ဖုန်းဆက်တော့မှ ဆိုင်ကထွက်လာခဲ့ပြီး ကိုအောင်မြတ်တို့ ဌာနဝင်းအတွင်းရှိ Guest house မှာပဲ ခနဝင်အိပ်ဖြစ်လိုက်သည်.. နိုးလာချိန်တွင် ဦးချမ်းသာအောင်၏ contact list တွင် ညက ဖုန်းနံပါတ်​တစ်ခု အသစ်တိုးခဲ့ကြောင်းတွေးမိတော့ ထုံးစံအတိုင်း “ဟက်”ခနဲ့ တချက်ရယ်လိုက်သည်
ယနေ့ ဦးချမ်းသာအောင် တာဝန်လွှဲယူပြီး ပထမဆုံးစတင်ရုံးတက်သောနေ့ဖြစ်သည်. ဦးချမ်းသာအောင်က ရုံးအကူမောင်စိုးသာအား
“စိုးသာ.. ဝန်ထမ်းတွေစုထားပေးဖို့နဲ့ ငါပြုစုခိုင်းထားတဲ့ ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ ကိုယ်ရေးရာဇဝင်တွေ ယူလာပေးဖို့ ရုံးအုပ်ကြီးကိုပြောလိုက် .. ခနနေ meeting လုပ်မယ်”
တအောင့်လောက်နေတော့ ရုံးအုပ်ကြီးက ဦးချမ်းသာအောင်၏ ရုံးခန်းထဲဝင်လာပြီး
“အိုကေ ..ရုံးအုပ်ကြီး ကျွန်တော်လာခဲ့မယ် “
ဝန်ထမ်းများ၏ ကိုယ်ရေးရာဇဝင်များကို ဖတ်ကြည့် မိတ်ဆက်လုပ်ပြီး ဌာနနှင့်ပတ်သက်၍ ဝန်ထမ်းများနှင့်ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးကြသည်.. ဝန်ထမ်းများ၏ ဌာနအလိုက် တင်ပြမှုများကို ဆွေးနွေးပြီး
“ကျွန်တော် သတိထားမိတာရှိတယ် .. ရုံးက ဦးစီးဇယားဘုတ်နဲ့ လျာထား/ပြည့်မီဇယားဘုတ်တွေမှားနေတယ်ဗျ.. အဲ့ဒါပြန်လုပ်ချင်တယ်.. ကျွန်တော့်ကွန်ပျူတာထဲမှာ ပုံစံရှိတယ် .. စာရေးတစ်ယောက်ကို ယူခိုင်းပြီး vinyl ထုတ်ဖို့လုပ်ပေး.. ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့ ကာလာစတစ်ကာတွေ ဝယ်ဖို့ လုပ်ပေးဗျာ .. ရုံးအုပ်ကြီး မအားရင်လဲ စိတ်ချရတဲ့ တစ်ယောက်ကို လွှတ်ပြီး ခိုင်းလိုက်ဗျာ..”
“ဟုတ်ကဲ့ပါ ဦးစီးမှူး .. ကျွန်တော် စီစဉ်လိုက်ပါ့မယ်.. “
“ကဲ အားလုံးပဲ လိုတာရှိရင်ပြောပါ.. personal ကိစ္စဖြစ်ဖြစ် .. အလုပ်ကိစ္စဖြစ်ဖြစ် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောပါ.. ကျွန်တော်ကူညီပေးနိုင်တာဆို ကူညီပေးပါ့မယ်.. အချိန်မရွေးဖုန်းဆက်ပါ .. ကျွန်တော့ဖုန်းနံပတ်လဲမှတ်ထားကြ.. ကျန်တာတော့မရှိတော့ပါဘူး ..”
ဦးချမ်းသာအောင် သတိထားမိသည်မှာ မှားနေသောဘုတ်များအပြင် မျက်ဝန်းတောက်တောက်နှင့် မိန်းကလေးတစ်ဦးပါ ပါဝင်ကြောင်းကို မည်သူမှ မသိလိုက်..
ခနနေတော့ ဦးချမ်းသာအောင်၏ ရုံးခန်းထဲကို ထိုမိန်းကလေး ဝင်လာသည်..
“ဆရာ .. သမီး vinyl ထုတ်ဖို့အတွက် softcopy လာယူတာပါ “
“အေး .. ကူးပေးမယ် ခနလေး.. vinyl က နင်သွားထုတ်မှာလား”
“ရပြီ .. ဘုတ်အရွယ်အစားကိုသေချာတိုင်းသွား ..ပြီးရင်စိုးသာကို ငါ့ဆီလွှတ်ပေး “
“စိုးသာ ဟိုဘက်ရုံးကို စာသွားပို့တယ် .. ဆရာ ဘာခိုင်းချင်လို့လဲ”
ထိုမိန်းကလေးက လှည့်ထွက်သွားသောနောက်ကို လိုက်ကြည့်မိသောအခါ ပွင့်ဖူးနေသော ပန်းတစ်ပွင့်၏ လှပသောကောက်ကြောင်းကို မြင်လိုက်ရသည်… ထိုမိန်းကလေးက သူ၏ရုံးခန်းတံခါးကိုပိတ်ရင်း နှာခေါင်းတချက်ရှုံ့ ရင်း တစ်​စုံတစ်​ခုကို ​ရေရွတ်​လိုက်သည်ထင်.. နားထဲသို့လေသံပါးပါးလေးတစ်ခုဝင်လာသည်.. သဲသဲကွဲကွဲတော့မကြားလိုက်… ဦးချမ်းသာအောင် တချက်ပြုံးလိုက်မိသည်..
နေ့ရက်တွေကပုံမှန်လည်ပတ်နေသည်… မနက်ရုံးအလာမှာ နှင်းငွေ့တချို့ကိုတွေ့လိုက်ရသည်.. အအေးဓာတ်အပြည့်အဝ မရရှိသေးသော်လည်း ရာသီဥတုက နေလို့ကောင်းလာပြီ.. ဆေးလိပ်တစ်လိပ်ကို ထုတ်ညှိပြီး ဖွာရိုက်လိုက်ချိန်တွင် ခံတွင်းက တစ်ခုခုကိုတောင်းတလာသည်..
“စိုးသာရေ .. ကန်တင်းက ကော်ဖီတစ်ခွက်သွားယူပေးကွာ ..”
ခနကြာတော့ ကော်ဖီရနံ့နှင့်အတူ အမွှေးနံ့တစ်ခုပါ စာပွဲးရှေ့သို့ရောက်လာသည်..
“ဆရာ .. ကိုစိုးသာကို ရုံးအုပ်ကြီးက ဖိုင်တွဲအဟောင်းတွေ စတိုးထဲထည့်ဖို့ ခိုင်းလိုက်လို့ သမီး ကော်ဖီယူလာပေးတာ”
“အော်.. အေး ကျေးဇူးပဲ.. ဒါနဲ့ ဟိုနေ့က vinyl သွားထုတ်တာအဆင်ပြေလား”
“ဟုတ်.. ပြေတယ်ဆရာ.. ပြန်တောင်ပြင်ပြီးသွားပြီလေ ဆရာရဲ့.. ဆရာ သိမထားမိလို့ဖြစ်မယ်”
“မရှိပါဘူး.. ဒါနဲ့ မင်းနာမည်က.. “
“အပန်းမကြီးရင် မနက်တိုင်း ကိုယ့်အတွက် ကော်ဖီတစ်ခွက်ယူပေးပါလား”
လက်မှတ်ထိုးလက်စ စာအုပ်များကို ဆက်ပြီး လက်မှတ်ထိုးနေလိုက်သည်.. သူမကို ပြန်မော့မကြည့်ဖြစ်ပေမယ့်.. သူမထွက်သွားတဲ့ ခြေသံသဲ့သဲ့ကို ကြားမိသည်.. အမွှေးနံ့ အချို့နှင့် ရင်​ခုန်​သံ ခပ်တိုးတိုးတစ်ခုက ဦးချမ်းသာအောင်၏ အခန်းထဲ ကျန်ခဲ့ကြောင်း သူမသိမည်မထင်..
ထိုအချိန်တွင် ဦးချမ်းသာအောင်၏ဖုန်း ringtone သံမြည်လာသည်.. ပေါ်နေသော နံပတ်ကို တချက်ကြည့်ကာ ပြုံးလိုက်ပြီး ဖုန်းကို ပြန်ချထားလိုက်သည်။ ခနကြာတော့ ဖုန်း message သံတချက် မြည်လာသည်။
(ဦး ဘာလို့ဖုန်းမကိုင်တာလဲ .. မအားဘူးလား .. ဆိုင်ကိုလာခဲ့ဦးလေ .. )
ခနကြာတော့ Message တစ်စောင် ထပ်ဝင်လာပြန်သည်။
(စနေနေ့က ထွက်ရက်ဦး .. ဦးအားရင်သမီးကို မနက် ၁ဝနာရီလောက် လာခေါ်ပေးပါလား .. ဦးကို သမီး အကူအညီတစ်ခုလောက်တောင်းစရာရှိတယ်)
ဘာမှပြန်ပို့မနေတော့ပဲ ထားလိုက်သည်။ ဆေးလိပ်ဗူးဆီကို လက်လှမ်းမိသော်လည်း မသောက်ဖြစ်.. အေးစက်စပြုလာသော ကော်ဖီကို တစ်ငုံသောက်လိုက်သည်။ ဒီကော်ဖီဟာ နောက်ဆုံးတစ်စက်ကျန်သည်အထိ ချိုမြန်နေမှာ အသေအချာပင် ..
နေ့ခင်းပိုင်းတွင် ကိုအောင်မြတ်က ဖုန်းဆက်ပြီး golf ရိုက်ဖို့ချိန်းသည်.. ညနေပိုင်းထွေထွေထူးထူလုပ်စရာမရှိသဖြင့် ချိန်းဖြစ်ကြသည်။ ဂေါက်ကွင်းရောက်တော့ ကိုအောင်မြတ်က ဦးချမ်းသာအောင်၏ ဂေါက်အိတ်ကိုသယ်ဖို့အတွက် နွယ်နီကိုခေါ်ထားသည်.. နွယ်နီက ရုပ်အချောကြီးမဟုတ်လှပေမည့် ပွင့်ဖတ်ပြည့်စုံသော ပန်းတစ်ပွင့်၏ အလှကိုပိုင်ဆိုင်ထားပြီး ပုရိသတို့အား လှုပ်ခတ်စေနိုင်သူလေးတစ်ဦးပင်..
ကျင်းထဲကျသွားသော ဂေါက်သီးကိုကောက်ယူပေးနေသော သူမ၏ကောက်ကြောင်းများက golfer များ၏ ဂေါက်သီးအပေါ်ရောက်နေသော အာရုံကို ထွေပြားစေသည်။
half way အရောက်တွင် ကိုအောင်မြတ်က “ကိုချမ်း ဘီယာတစ်ဗူးစီလောက် သောက်ရအောင်ဗျာ” ဟု ဆိုလာရာ မငြင်းမိ..
“ဆရာတို့ ခနထိုင်ဦးမှာလား .. နွယ်နီဗိုက်ဆာလို့ ထမင်းဆီဆမ်းလေး ခနစားချင်တယ်”
“ဟာ.. နင်တစ်ယောက်ထဲ စားမှာလား .. ငါတို့ကိုကော မကျွေးဘူးလားဟ” ဟုနောက်လိုက်ရာ ..
“ကိုအောင်မြတ်ကြီးကလဲ ကျွေးပါတယ်.. စားပါရှင် .. နွယ်နီတို့က ကပ်စီးမနည်းပါဘူး”
“ဟား…ဟား.. ငါ့ကိုမကျွေးနဲ့ နင့်ဆရာအသစ်ကိုပဲ ကျွေးလိုက်ပါဟာ ..”
“ဆရာ .. စားမလား .. နွယ်နီဝယ်ကျွေးမယ်လေ.. ” ဟု ဆိုလိုက်ရာ ကိုအောင်မြတ်က
“ဟဲ့ .. နင့်မှာရှိနေတာကို ဝယ်ကျွေးစရာလား.. ရှိတာပဲကျွေးလိုက်ပေါ့ .. ကိုချမ်းကလဲ ရှိတာလေးပဲ စားချင်ရှာမှာဟ .. ဟားဟား” ဟု ဝင်ပြောပြီး အားပါးတရ ရယ်နေသည်။
“ဟာဗျာ.. ” “ကိုအောင်မြတ်ကြီးနော်”
လူနှစ်ယောက်ဆီမှ စကားနှစ်ခွန်းက မတူညီသော်လည်း တပြိုင်နက်ထဲ ထွက်လာပြီး တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်လဲ ကြည့်လိုက်မိသည်.. မျက်ဝန်းနှစ်စုံ၏ စက္ကန့်ပိုင်းလောက် ဆုံတွေ့မှုက အားနာမှုမဟုတ်သော တစ်​စုံတစ်​ရာကို ရှာဖွေတွေ့ရှိသယောင်ယောင် ခံစားမိလိုက်ကြသည်..
ဆက်ရိုက်ကျရာ ဦးချမ်းသာအောင်၏ အာရုံက ဂေါက်သီးအပေါ်မှာထက် နွယ်နီ့အပေါ်ရောက်နေသည့်အတွက် ရိုက်ချက်များက အလွဲလွဲအချော်ချော် .. နွယ်နီကတော့ တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ပင်.. ကွင်းပတ်ပြီးတော့ golf club မှာပဲ ဆက်သောက်ဖြစ်သည်..
“ကိုအောင်မြတ် တစ်ခုကူညီဗျာ.. ကျွန်တော့ကို ဟိုတယ်တစ်ခန်းလောက် booking လုပ်ပေးဗျာ.. စနေနေ့ ဧည့်သည်တစ်ယောက်လာမှာမို့လို့”
“ကျွန်တော့် guest house မှာတည်းခိုင်းလိုက်ပါလား ..”
“မဟုတ်ဘူးဗျာ.. သူက ခနပဲနားမှာ .. ပြီးရင်ခရီးဆက်သွားမှာ ..”
“အာ.. ပေါက်ပြီး.. ပေါက်ပြီဗျာ.. “
မြွေအချင်းချင်း ခြေဆိုတာဘာလဲ မေးနေစရာမလို .. ထိုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဆက်မပြောဖြစ်ကြတော့ပဲ ထွေရာလေးပါးပြောဆိုပြီး မှောင်လာသည်ဆက်သောက်ဖြစ်ကြသည်..
ဟိုတယ်အခန်းငယ်အတွင်း ကမ္ဘာဦးလူသားနှစ်ဦးရဲ့ စစ်ခင်းမှုက ပြင်းထန်နေသည်.. အချိန်တန်လျှင်ရောက်မည့်ခရီးလမ်းကို အားမာန်​နှင့်လှော်ခတ်နေကြသည်.. ခန္ဓာကိုယ်​ချင်း ထိတွေ့သံတွေက ပြင်းထန်နေသလို အသက်ရူသံတွေကလဲ ပြင်းထန်နေသည်.. သူမ၏ နှစ်ခမ်းကို ကိုက်ကာ ညည်းညူသံတွေက ဦးချမ်းသာအောင်ကို အားမာန်အသစ်တွေရရှိ
“ဦး.. အား..အ့.. ဦး.. လုပ်ကွာ.. ကြမ်းကြမ်းကြီး လုပ်.. အရမ်းကောင်းတယ်.. ဦး “
” အာ.. ရှီး .. ဦး .. ကြမ်းကွာ..”
ရုတ်တရက် သူမက ဦးချမ်းသာအောင်၏ ရင်ဘတ်ကို တွန်းလွှတ်လိုက်သည်.. လျှပ်စစ်သံလိုက်စက်ကွင်းဖြတ်တောက်ခံလိုက်ရသော အရာနှစ်ခုက ခနတာကွဲကွာသွားသော်လည်း .. စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်း ပြန်လည်ပေါင်းစည်းသွားသည့်အချိန်တွင် ဦးချမ်းသာအောင် အောက်တွင် ရောက်သွားခဲ့သည်..
သူမက ဦးချမ်းသာအောင်၏ နှုတ်ခမ်းဆီသို့ အနမ်းတစ်ပွင့်ချွေချပြီး နားနားသို့ကပ်ကာ လေသံဖြင့် ..
“ဦး.. အရမ်းမောနေမယ်.. သမီးကို ခနအချိန်ပေးနော်… ဦးမျက်စိမှိတ်ထား .. “
စကားဆုံးသည်နှင့်သူမက ခါးကိုပြန်မတ် ဦးချမ်းသာအောင်၏ ရင်ဘတ်ကို လက်ဖြင့်ထောက်ကာ လှုပ်ရှားမှုကို စတင်လိုက်သည်.. သူမ၏ မျက်နှာက မကြာခင်ထပ်မံပြင်းထန်တော့မည့် တိုက်ပွဲတစ်ခုကို ဦးဆောင်မယ့် ရောမခေတ် စစ်ဘုရင်မတစ်ဦး၏ ဟန်ပန်အပြည့် .. သူမ၏ ခါးကိုနွဲ့ကာ စတင်လိုက်သော တိုက်ပွဲခေါ်သံကြောင့်..
“အာ့ ..” ဦးချမ်းသာအောင်၏ နှုတ်မှ ငြီးသံသဲ့သဲ့ထွက်သွားခဲ့သည်..
“ဦး .. ကြိုက်.. လား… “
“သမီး.. ကြမ်းတော့မယ်နော်.. “
စကားအဆုံးနှင့် လှုပ်ရှားမှုအစက ထပ်တူညီလှသည်.. မိမိကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်သော ဗျူဟာအကုန်သုံး၍ အားမန်အပြည့်ဖြင့်တိုက်ခိုက်နေသော စစ်ဘုရင်မတစ်ဦး၏ လှုပ်ရှားမှုများက ပြင်းထန်လွန်းသော်လဲ ကချေသည်တစ်ဦး ယိမ်းကနေသည့်ဟန်..
ဦးချမ်းသာအောင်၏ လက်နှစ်ဖက်က သူမ ရင်နှစ်မွှာဆီသို့ ရောက်ရှိချိန်တွင် ..
“အား…အာ့.. ရှီး .. ကောင်းလိုက်တာ ဦးရယ်”
ညည်းတွားသံကြောင့် တိုက်ပွဲအဟုန်မှာ မရပ်တန့်သွားသည့်အပြင် ပိုမိုပြင်းထန်လာခဲ့သည်..
“အား.. အီ. ရှီး .. ဦး ချိုချိုစို့ပေးကွာ.. သမီး လိုချင်​တယ်​.. ရှီး.. “
စစ်ဘုရင်မ၏ နူးညံ့သော အမိန့်ကို တသွေမတိမ်းလိုက်နာသည့် စစ်သူရဲကောင်းတို့၏ ထုံးအရ ဦးချမ်းသာအောင်က သူမခါးကို ဖက်ပြီး ထလိုက်သည်…
စိတ်ဇော၏ အဟုန်နောက်ကို ကောက်ကောက်ပါအောင် လိုက်နေသော သူ၏ နှုတ်ခမ်းများက သူမ၏ ရင်နှစ်မွှာတွင် စစ်မျက်နှာ ဖြန့်ကျက်လိုက်သည်..
သူမက အောက်နှုတ်ခမ်းကို ကိုက်လိုက်ပြီး
“အီး.. ကောင်းလိုက်တာ ဦးရယ်… ရှီး..အ့.. ကြမ်းကြမ်းကြီး.. စို့ကာ.. “
ဦးချမ်းသာအောင်၏ လက်နှစ်ဖက်က သူမ၏ခါးဆီမှ အောက်ကိုလျောချပြီး သူမ၏ ပြည့်တင်းနေသော အလှတရားနှစ်ခုဆီသို့ စစ်မျက်နှာချဲ့လိုက်ပြန်သည်..
အပေါ်အောက်ဖြန့်ကျက်ထားသော စစ်မျက်နှာနှစ်ခုဆီမှ အစုန်အဆန်တိုက်ခိုက်မှုများကြောင့် သူမ၏ ခန္တာကိုယ်ယိမ်းထိုးသွားသည်..
အား.. အမေ့.. ကောင်းတယ်.. ကောင်းတယ်.. အရမ်းကောင်းတယ် ဦး.. သမီးပြီးပြီ.. အား ..ရှီး.. ဦးရယ် ..
စစ်ပန်းသွားသော စစ်ဘုရင်မ၏ မျက်နှာသည်.. သူမ၏ စစ်သူရဲကောင်းပုခုံးပေါ်သို့မှောက်ချလိုက်ပြီး ပုခုံးသားကို ကြိတ်ပြီး ကိုက်ခဲလိုက်သည်.. သူမနှင့် တပြိုင်နက်ထဲ အောင်လံစိုက်ထူနိုင်ခဲ့သော ဦးချမ်းသာအောင်က သူ၏ ဖိုဓာတ်များက ပြင်ပသို့ထွက်ခွာခွင့်ပြုလိုက်သည်
“မောလိုက်တာဦးရယ် .. သမီးအရမ်းကြမ်းလိုက်တယ်.. “
ဦးချမ်းသာအောင်၏ လက်က ကုတင်ဘေးစားပွဲပေါ်တွင်တင်ထားသော ဆေးလိပ်ဗူးဆီသို့ လက်လှမ်းလိုက်သည်..
“ဟွန့်.. ” သူမက တချက်နှာခေါင်းရှုံ့ပြသည်..
“ဟား.. ” ဦးချမ်းသာအောင်က တချက်ရယ်လိုက်ပြီး ဆေးလိပ်ဗူးကိုပြန်ချပြီး tissue box ထဲမှ tissue စက္ကူ နှစ်ရွက်ကိုဆွဲထုတ်လိုက်သည်.. အလိုက်သိခဲ့သော သူမကို နှစ်သိမ့်သည့်သဘောဖြင့် သူမ၏ နဖူးရှိဆံစဖျားများတွင့် တွဲခိုနေသော ချွေးများကို သုတ်ပေးလိုက်သည်..သူမကလဲ ကျေးဇူးတင်အသိအမှတ်ပြုသည့်အထိမ်းအမှတ်ဖြင့် ဦးချမ်းသာအောင်၏ ပါးနှစ်ဖက်ဆီသို့ အနမ်းပန်းတစ်ပွင့်ဆီချွေလိုက်သည်.. ဦးချေမ်းအောင်ကလဲ သူမ၏ နဖူးဆီသို့ အနမ်းပန်းတစ်ပွင့်ပြန်လည်လက်ဆောင်ပေးလိုက်သည်..
“ဦး..ချွတ်လိုက်တော့မယ်.. သမီး..ရူးရူးပေါက်ချင်လို့.. ဟီး.. “
“အင်း .. “
သူမက ဦးချမ်းသာအောင် ကိုယ်ပေါ်မှအသာထလိုက်ပြီး tissue နှစ်ရွက်ခန့်ကို ဆွဲထုတ်ကာ ဦးချမ်းသာအောင်ကိုယ်ပေါ်တွင်တွဲကပ်နေသော အလွှာပါးကို ဂရုတစိုက်ချွတ်ပေးလိုက်သည်..
ထို့နောက်သူမက ဆေးလိပ်ဗူးထဲမှ ဆေးလိပ်တစ်လိပ်ကို ထုတ်ယူမီးညှိပေးလိုက်ပြီး ဦးချမ်းသာအောင်နှုတ်ခမ်းတွင် တပ်ပေးလိုက်သည်..
“ဦး .. သမီး..ရူးရူးပေါက်လိုက်ဦးမယ်.. ပြီးရင် လာခဲ့နော်.. သမီး ဦးကို သန့်ရှင်းရေး လုပ်ပေးမယ်.. “
ဦးချမ်းသာအောင်က ဆေးလိပ်ကို ခပ်ပြင်းပြင်းတစ်ချက်ရှိုက်သွင်းလိုက်သည်..
ပြန်လည်မှုတ်ထုတ်လိုက်သော မီးခိုးငွေ့များနှင့်အတူ သူ၏ မောပန်းမှုအတော်များများလဲ ပါဝင်လွင့်မျောသွားသည်
ရေချိုးခန်းထဲက လှမ်းအော်လိုက်သော သူမအသံချိုချိုကို ကြားလိုက်ရသောအခါ ဦးချမ်းသာအောင်က သောက်လက်စဆေးလိပ်တိုကို ပြာခွက်ထဲထိုးချေလိုက်သည်.. ထို့နောက် တဘက်တထည်ကို ခါးတွင်ပတ်လိုက်ပြီး ​ရေချိုးခန်းထဲဝင်လာလိုက်သည်..
အခြားတဘက်တစ်ထည်ကို ရင်လျားထားသော သူမက ဦးချမ်းသာအောင်၏ လည်ပင်းကို သိုင်းဖက်ကာ အနမ်းတစ်ပွင့်ဖြင့် ကြိုဆိုလိုက်သည်..
သူမ၏ ညင်သာသော အထိအတွေ့ဖြင့် သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပေးတာကို ခံစားပြီးနောက် ​ရေချိုးခန်းထဲမှ အတူပြန်ထွက်ခဲ့သည်..
ဦးချမ်းသာအောင်က ကုတင်ခေါင်းရင်းတွင် ကျောမှီပြီး ခြေဆင်းထိုင်လိုက်စဉ်တွင် သူ၏ ဖုန်းမြည်သံကို ကြားလိုက်ရသည်.. ဖုန်း screen ကို ကြည့်လိုက်ရာ ကိုအောင်မြတ် ခေါ်နေကြောင်းကို တွေ့လိုက်သဖြင့် ဖုန်းကိုင်လိုက်သည်..
“ဟဲလို.. ကိုအောင်မြတ် ပြောပါ.. “
“ကိုချမ်း ဟိုတယ်က အဆင်ပြေလား.. “
“ပြေတယ် .. ကိုအောင်မြတ်.. ​ကျေးဇူးပဲ..”
“ရပါတယ်​ဗျာ.. see you .. ကိုချမ်း”
“ok.. see you”
သူမကိုကြည့်လိုက်တော့ သူမက ကုတင်ပေါ်တွင် ကန့်လန့်ဖြတ်လှဲအိပ်နေပြီး သူ၏ ပေါင်တစ်ဖက်ပေါ်ကို ခေါင်းအုံးထားသည်..
သူမမျက်လုံးတွင် ရှက်ရွံသော အရိပ်တစ်ခုဖြတ်ပြေးသွားသည်.. သူမ၏မျက်နှာက ဦးချမ်းသာအောင်ဖက်သို့ လှည့်လာပြီး ..
“ဦး.. သမီးကို တစ်မျိုးမထင်နဲ့နော်. သမီးတကယ်အားနာတယ်..”
“သမီးကို ၃သိန်း လောက် ခနလှည့်ပါလား .. ဆိုင်က ပိုက်ဆံရှင်းရင် သမီးဖဲ့ဆပ်ပါ့မယ်… ဟိုလေ..”
“အရေးကြီးလား.. ခုတော့ အဲ့လောက်ပါမလာဘူး..”
“ဟိုလေ သမီးဖေဖေပြသနာတစ်ခုတက်နေလို့ပါ.. သမီး ဦးနဲ့ ဒီတိုင်းလေးပဲ ပတ်သက်ချင်တာ.. ဒါပေမယ့် ..”
“ရပါတယ်​ အပြန် ပိုက်ဆံဝင်ထုတ်ပေးမယ်.. “
“ကျေးဇူးတင်လိုက်တာ ဦးရယ်.. သမီး ဦးကို အားလဲနာတယ်.. ရှက်လဲရှက်တယ်..သမီးကို တမျိုးမထင်နဲ့နော် .. သမီး ပြန်ဆပ်မှာပါ “
ဦးချမ်းသာအောင်က သူမကို တချက်ပြုံးပြပြီး သူမ၏ ဆံနွယ်စတွေကို ပွတ်သပ်လိုက်သည်..
သူမက ဦးချမ်းသာအောင်ရဲ့ ရင်ခွင်ထဲသို့ ခေါင်းတိုးဝှေ့ဝင်လာသည်.. ခနနေတော့ သူမ၏ မျက်နှာကိုမော့ကြည့်ပြီး လေသံတိုးတိုးလေးဖြင့် ..
“ဦး.. သမီး..ဦးရဲ့နှုတ်ခမ်းတွေကို နမ်းချင်လိုက်တာ..”
ထိုတိုးတိတ်ငြင်သာသော လေသံသဲ့သဲ့ လိပ်ပြာတောင်ပံခတ်သံလေးက အခန်းငယ်လေးအတွင်း မုန်တိုင်းငယ်တစ်ခု ပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်လာစေသည်…
သူမ၏ တောင်းဆိုမှုရဲ့အဆုံးမှာ ဦးချမ်းသာအောင်ရဲ့ နှုတ်ခမ်းက သူမနှုတ်ခမ်းနှင့်ထိတွေ့မိသည်.. မွတ်​သိပ်​သော အနမ်းများမဟုတ်ပေမယ့် ကြာမြင့်သော အနမ်းတွေ.. အဝတ်မဲ့ခန္တာကိုယ်နှစ်ခုအပေါ်ပြေးလွှားနေသော လက်အစုံတို့က ဆန့်ကျင်ဘက်ကို ထိတွေ့ပွတ်သပ်နေကြသည်..
တငြိမ့်ငြိမ့်နှင့်လူးလွန့်နေသော ရေယဉ်ကြောတွင်မျောပါနေသည့် လူသားနှစ်ဦး၏ ဆက်နွယ်မှုက ကြာမြင့်ရီဝေလာသည်..
ယခုတခေါက် လျှောက်လှမ်းရသော ခရီးလမ်းမှာတော့ အလောတကြီးမဟုတ်ပဲ တလှမ်းချင်းလှမ်းနေကြသည်.. ထိတွေ့မှုနောက်ကို လိုက်မျောရင်း ပန်းတိုင်ကိုလှမ်းမြင်ရချိန်မှာတော့ လူ့သဘာဝအရ စိတ်ဆန္ဒတွေပြင်းပြလာပြန်သည်..
“အ့.. အင့်.. ရှီး .. ဦး.. ကြမ်းတော့…ကြမ်းကြမ်းကြီးလုပ်တော့.. သမီး.. ဖြစ်တော့မယ်..”
သူမ၏ တောင်းဆိုမှုအတွက် သူမကိုယ်တိုင် စိတ်တိုင်းကျဖန်တီးနိုင်စေရန် သူမကို အလှည့်ပေးလိုက်သည်..
စစ်ပန်းနေသော စစ်ဘုရင်မ၏ မြင်းစီးဟန်မှာ နွမ်းရိနေသော်လည်း မာန်ပါလှသည်.. စည်းချက်ညီညီ အပေးအယူမျှမျှနှင့် ပန်းဝင်လာသော လူသားနှစ်ဦး တစ်ဦးကိုတစ်ဦးတင်းကျပ်စွာပွေ့ဖက်ထားကြသည်.. အနမ်းများကို ဖလှယ်ရင်း အမောဖြေနေကြသည်..
“ဦးရယ်.. သမီးတော့ ရူးတော့မှာပဲ.. ဦးနဲ့နေရတာကို အရမ်းကြိုက်နေပြီ..”
အင်အားပြင်းထန်သော မုန်တိုင်းများ၏ နောက်ဆက်တွဲ ဖြစ်ပေါ်လာသော မုန်တိုင်းငယ်များက အင်အားမပြင်းထန်တော့သော်လဲ အချိန်ကြာမြင့်လှသည်..
သူမကို ဆိုင်ပြန်ပို့ပြီးနောက် ဦးချမ်းသာအောင်တစ်ယောက်ထဲ အရက်ဆိုင်ထိုင်မိသည်.. အရက်သောက်ရတာ စိတ်မပါပေမယ့် တော်တော်များများသောက်ဖြစ်သွားပြီး ပုလင်းတစ်ဝက်ကျိုးချိန်လောက်တွင် သူမက ဦးချမ်းသာအောင်ဆီ ဖုန်းဆက်လာသည်..
“ဦး ကျေးဇူးအရမ်းတင်တယ်.. သမီး ပြန်ပေးမယ်နော်..”
“ဦး.. သမီးထွက်ရက်ရရင် ဦးဆီ လာချင်တယ်..”
“ဦးကော သမီးနဲ့မတွေ့ချင်ဘူးလား.. “
သူမနဲ့ အတန်ကြာဖုန်းပြောဖြစ်သည်.. ထိုအချိန်တွင်.. ဦးချမ်းသာအောင်၏ မျက်လုံးထဲကို ပုံရိပ်တစ်ခု ဝင်ရောက်လာသည်.. ထိုပုံရိပ်ကို တွေ့လိုက်တိုင်း လူမသိသူမသိဖြစ်နေကျအတိုင်း ရင်ထဲ လှပ်ခနဲ့ တစ်ချက် ဖြစ်သွားသည်..
သူမ၏ စကားအပြန်ကို မစောင့်နေတော့ပဲ ဖုန်းချလိုက်သည်.. ဖုန်းချပြီးပြီးချင်းမှာပဲ ထိုပုံရိပ်က ဦးချမ်းသာအောင်ကို လှမ်းမြင်လိုက်ပြီး ..
“ဟာဆရာ… ” “မိုးမိုးသဲ..”
နှစ်ဦးသား မျက်လုံးချင်းဆုံကြည့်နေသော်လည်း စက္ကန့်ပိုင်းလေးတစ်ခုထိ စကားမပြောဖြစ်ကြ..
“အင်း .. မင်းရော ဘာလာလုပ်တာလဲ..”
“ခေါက်ဆွဲကြော်.. လာဝယ်တာ ဆရာ .. သမီးအိမ်က ဒီနားမှာပဲ.. “
ထို့နောက် ပြန်လည်တိတ်ဆိတ်သွားပြန်သည်.. ဦးချမ်းသာအောင်က ဆေးလိပ်တစ်လိပ်ထုတ်ကာ မီးညှိလိုက်သည်.. မိုးမိုးသဲက
“ကြာမလား မသိပါဘူး.. လူတွေများလိုက်တာ .. ” ဟု စိတ်ပျက်သလို တိုးတိုးလေး ရေရွတ်လိုက်သည်..
“ရှင်… ဟုတ်ကဲ့ဆရာ “
“မှာပြီးပြီလား .. ဘယ်နှစ်ပွဲလဲ ..”
“နှစ်ပွဲရှင့် .. မှာပြီးပြီ.. “
ဦးချမ်းသာအောင်က ဝိတ်တာတစ်ယောက်ကို လှမ်းခေါ်ပြီး bill ယူခဲ့ရန်နှင့် မိုးမိုးသဲမှာထားသော ခေါက်ဆွဲကြော်ဖိုးကို သူ့ bill တွင် ပေါင်းထည့်ရန် ပြောလိုက်သည်..
ခနကြာတော့ ခေါက်ဆွဲကြော်နှစ်ဗူးနှင့် bill စာရွက်ရောက်လာသည်.. ဦးချမ်းသာအောင်က ကျသင့်ငွေကို ထုတ်ရှင်းပေးလိုက်ရာ မိုးမိုးသဲက
” ဆရာ .. မလုပ်ပါနဲ့.. သမီးခေါက်ဆွဲကြော်ဖိုးကို ပြန်ယူပါ..” ဟုဆိုကာ .. ၅ထောင်တန်အရွက် အတင်းပြန်ပေးသည်.. ဦးချမ်းသာအောင်က သူမလက်ကို အသာအယာပြန်လည်တွန်းဖယ်လိုက်သည်.. လက်နှစ်ခု၏ ထိတွေ့မှုမှာ စက္ကန့်ပိုင်းရဲ့ တဝက်စာခန့်သာရှိသော်လည်း ဦးချမ်းသာအောင်၏ ရင်ထဲ လှပ်ခနဲ့ တချက်ဖြစ်သွားသည်..
“မလုပ်ပါနဲ့ ဆရာ.. ပြန်ယူလိုက်ပါ.. အားနာစရာကြီး ..”
သူမလက်ကို အသာအယာပြန်ဖယ်လိုက်ရင်း သူမကို မျက်လုံးချင်း ဆုံကြည့်လိုက်သည်..
“အားနာရင် တနင်္လာနေ့ကျ ကော်ဖီပြန်တိုက် .. ဟုတ်ပြီလား .. “
မိုးမိုးသဲ၏ မျက်နှာပြုံးရိပ်သန်သွားသည်.. ကော်ဖီယူလာပေးရန် ပြောခဲ့တဲ့နေ့နောက်ပိုင်း တရက်မှ သူမကော်ဖီမယူပေးခဲ့ .. ဆိုင်တံခါးပေါက်ဆီကို ထွက်သွားသော ဦးချမ်းသာအောင်၏ နောက်ကျောကို လှမ်းကြည့်ပြီး..
“ဆရာ.. ဆရာ့ ပုလင်းကျန်ခဲ့ပြီ.. “
ဦးချမ်းသာအောင်၏ ခြေလှမ်းများ ရပ်တန့်ကာ သူမဘက်ကို လှည့်ကြည့်ပြီး
“ရတယ် .. ဆိုင်က သိမ်းထားပေးလိမ့်မယ်.. ” ဟုပြောလိုက်သည်.. ထို့နောက်ပြန်လှည့်ထွက်သွားသည်..
“ခစ်.. ဘာကြီးမှန်းလဲ မသိဘူး.. ရုပ်တည်ကြီးနဲ့..”
တနင်္လာနေ့မနက် ရုံးရောက်တော့ စားပွဲပေါ်တွင် တစ်​စုံတစ်​ခုကို အရင်ဆုံးရှာဖွေကြည့်မိသည်.. ထူးထူးခြားခြားအရာ ဘာမှမရှိပေ.. လက်မှတ်ထိုးရမည့် စာများနှင့် ဝင်စာ/ထွက်စာဖိုင်များကိုသာတွေ့ရသည်.. ဦးချမ်းသာအောင်လဲ ဝင်စာများကို ဖတ်ကြည့်နေလိုက်သည်..
ခနကြာတော့ ဦးချမ်းသာအောင်၏ဖုန်းသို့ Message တစ်စောင် ဝင်လာသည်.. သူမသိသော ဖုန်းနံပါတ်​တစ်ခု ..
ဘာမှန်းမသိသဖြင့် ဖုန်းကိုပြန်ချထားပြီး စာတွေကို ဆက်ဖတ်နေလိုက်သည်.. ၅ မိနစ်လောက်ကြာတော့ ခုနက နံပါတ်ဖြင့် Message တစ်စောင်ထပ်ဝင်လာပြန်သည်..
(Check your viber)
ဦးချမ်းသာအောင်က မျက်မှောင်တစ်ချက်ကျုံ့လိုက်ပြီး မဖွင့်ဖြစ်တာကြာပြီဖြစ်သော သူ့ဖုန်း၏ data switch ကိုဖွင့်လိုက်သည်.. viber ကို ဖွင့်ကြည့်လိုက်ရာ ကော်ဖီပန်ကန်ပုံလေးတစ်ခုရောက်နေပြီး အောက်တွင် ..
(Good morning sir.)
ဦးချမ်းသာအောင်က တစ်ချက်ပြုံးလိုက်ပြီး ဖုန်းကိုပြန်ချထားလိုက်သည်..
“အေး .. ဝင်လာခဲ့”
အခန်းတံခါးခေါက်ကာ ဝင်ခွင့်တောင်းပြီး ဝင်လာသူက မိုးမိုးသဲ .. သူမဆီမှ မွှေးမြလတ်ဆတ်သောရနံ့က သူ၏ စိတ်ကို လန်းဆန်းသွားစေသလိုပင် .. သူမက ပြုံးစိစိမျက်နှာထားလေးနဲ့
“ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်က ဆရာခိုင်းထားတဲ့ လချုပ်စာရင်းတွေ လာပြတာပါဆရာ..”
“အေး .. ထားခဲ့လိုက်.. ဒါနဲ့ မင်းတိုက်တဲ့ကော်ဖီသိပ်ချိုတယ် ..”
သူမက ဖိုင်တစ်ခုကို စားပွဲပေါ်တင်ပြီး လှည့်ထွက်သွားသည်.. သူမရဲ့ ကောက်ကြောင်းအလှကို ဦးချမ်းသာအောင် တစ်ချက်ငေးကြည့်ပြီး သူမတင်ထားသော ဖိုင်ကို ဖွင့်လိုက်သည်..
ဖိုင်ထဲတွင် ဘာစာရွက်မှမပါ.. ဖိုင်အလွတ်.. သူကလဲ မိုးမိုးသဲကို လချုပ်လုပ်ရန် မခိုင်းခဲ့ကြောင်းတွေးမိတော့ နှစ်​နှစ်​ခြိုက်​ခြိုက်​ ပြုံးလိုက်ပြီး
“ဒီကောင်မလေးတော့.. ” ဟု တိုးတိုးလေး ရေရွတ်လိုက်သည်..
ခနကြာတော့.. မိုးမိုးသဲက ကော်ဖီတစ်ခွက်နှင့် Cloret ပီကယ် တစ်ခုကို ဗန်းလေးနဲ့ထည့်ပြီး အခန်းထဲသို့ ဝင်လာသည်.. ထို့နောက် စောစောက သူပေးခဲ့သော ဖိုင်အလွတ်လေးကို ပိုက်ကာ ..
“ဆရာ.. ဘာခိုင်းစရာရှိသေးလဲ ..”
“သမီးလုပ်ထားတဲ့ လချုပ်တွေကောမှန်ရဲ့လား ဆရာ.. ခိခိ..”
ဦးချမ်းသာအောင် ဘာမှပြန်မဖြေပဲ သူမမျက်နှာကိုသာ နူးညံ့စွာ ကြည့်နေမိသည်.. နှစ်ဦးကြားတွင် စကားသံတွေ ခနတိတ်ဆိတ်သွားပြီးနောက်..
“ဆရာ ခွင့်ပြုပါဦး .. “
သူမ အခန်းထဲက ထွက်သွားသောအခါမှ ဦးချမ်းသာအောင် သက်ပြင်းမောတချက် ရှိုက်ထုတ်လိုက်ပြီး တစ်ယောက်ထဲပြုံးလိုက်မိသည်..
ကိုအောင်မြတ်က ကွင်းပတ်ရန်ချိန်းသဖြင့် ဂေါက်ကွင်းသို့ထွက်လာခဲ့ရာ ဂေါက်ကွင်းရောက်ခါမှ ကိုအောင်မြတ်က ကိစ္စပေါ်လာသဖြင့် မရိုက်ဖြစ်တော့ကြောင်း ဖုန်းလှမ်းဆက်သည်.. ကွင်းမပတ်ဖြစ်တော့သဖြင့် practise ကွင်းတွင် ဂေါက်သီးတဗန်းရိုက်လိုက်သည်.. တစ်ဗန်းကုန်တော့ စိတ်မပါတော့သဖြင့် club house က ဆိုင်တွင် အရက်တစ်လုံးမှာကာ တစ်ယောက်ထဲ သောက်နေမိသည်..
“ဆရာ.. ကိုအောင်မြတ်တို့နဲ့ ချိန်းထားလို့လား..”
“အင်း .. ကိုအောင်မြတ် အလုပ်ပေါ်လာလို့ မရိုက်ဖြစ်တော့ပါဘူး..”
တခါတရံ မသိစိတ်က စေခိုင်းမှုကို သိစိတ်က တားမြစ်ရန် အချိန်မရ.. မစဉ်းစားထားသော်လည်း အလိုလိုပြောမိသည်..
“နွယ်နီ.. caddy လိုက်စရာမရှိရင် ကိုယ့်ကို အဖော်လုပ်ပေးပါလား ..”
“ရှင်.. အင်း.. ဆရာ .. သမီး မငယ်ကို မေးကြည့်ဦးမယ်..”
ခဏကြာတော့ နွယ်နီပြန်ရောက်လာပြီး ..
“ဆရာ .. အဆင်မပြေဘူး.. သမီးတို့ကို ထိုင်ခွင့်မပေးထားလို့ပါ..”
“အင်း.. ရပါတယ်​.. “
“သမီး မထိုင်ပေးချင်လို့ မဟုတ်ဘူးနော်.. ဆရာ..”
အရက်တစ်ငုံသောက်ပြီး သူမကို မော့ကြည့်လိုက်တော့ သူမက တစ်ခုခုတွေးနေသည့်ပုံ..
“ဆရာ့ ဂေါက်အိတ် သွားသိမ်းလိုက်ဦးမယ်..”
ပျင်းရိငြီးငွေ့နေသဖြင့် အရက်ကိုချည်းဖိသောက်နေလိုက်သည်.. ၃ ခွက်လောက်သောက်ပြီးသွားချိန်တွင် နွယ်နီပြန်ရောက်လာသည်.. ပါတိတ်ဝမ်းဆက်တပတ်နွမ်းလေးကို ဝတ်ဆင်ထားသော သူမသည် အရမ်းကြီးမထည်ဝါသော်လဲ မညိုးနွမ်းနေ..
“ဆိုင်တစ်ဆိုင်ဆိုင်ပေါ့.. ဒီမှာ သမီးမှ ထိုင်လို့မရတာ..”
ဦးချမ်းသာအောင်က ပိုက်ဆံရှင်းလိုက်ပြီး လက်ကျန်ပုလင်းကိုယူကာ ထွက်လာခဲ့သည်.. ကားပေါ်ရောက်တော့..
“ဘယ်ဆိုင်ကောင်းလဲ .. “
“ဆရာ .. အိန်ဂျယ် ကို သွားမလားဆရာ..”
“ဟင်.. ကိုယ်မသိဘူး.. “
“ဟုတ်.. သမီးသိတယ်.. တည့်တည့်ပဲမောင်း..ဆရာ..”
ကားအတွင်းဖွင့်ထားသော သီချင်းသံမှအပ တိတ်ဆိတ်နေသည်.. လမ်းညွှန်ပေးသော ဆည်းလည်းသံလွင်လွင်လေးကတော့ ရံဖန်​ရံခါ ထွက်ပေါ်လာသည်..
ခြံဝန်းကျယ်အတွင်း ဖွင့်ထားသော ဆိုင်ကိုရောက်တော့ သူမကပဲ ဦးဆောင်ပြီ သီးသန့်ခန်းတစ်ခုယူလိုက်သည်..
“ဆရာ… ဘာမြည်းမလဲ ..”
သူမအတွက် အအေးတစ်ဗူးနှင့် သူ့အတွက် ရေခဲ၊ရေသန့်နှင့် အမြည်းမှာလိုက်သည်..
“ဆရာ့ အမြည်းတွေပဲ နည်းနည်းစားမယ် .. “
သာမန်ထက်ထူးထူးခြားခြားမလှပသော်လည်း သူမမျက်နှာမှာ ရှင်းသန့်နေသည်.. ပြည့်ဖြိုးသောခန္ဓာကိုယ်အလှနှင့် လိုက်ဖက်ညီစွာဝတ်ဆင်တတ်မှုက ပုရိသပုဂ္ဂိုလ်တွေကို ဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့ အားသာချက်တစ်ခု ဖြစ်မည်..
“ဒါနဲ့ ဆရာ့ကို အကိုလို့ ခေါ်လို့ရမလား.. “
“ဟီး.. ညီမက အဲ့လိုခေါ်ချင်နေတာ.. “
သူမရယ်ပြုံးလိုက်မှ သွားထပ်လေးတစ်ခုကို မြင်လိုက်ရသည်.. သူမအပြုံးကို စတင်မြင်ဖူးခြင်းပင်..
“ဟော..အကို.. အာ..ကိုကြီးလို့ပဲ ခေါ်တော့မယ်.. ဘာတွေတွေးနေပြန်တာလဲ..”
ဦးချမ်းသာအောင်က အရက်ခွက်ကို မော့သောက်လိုက်ပြီး သူမအမေးကို ပြန်ဖြေလိုက်သည်..
“ဒီအချိန်​မှာ ကိုယ်တွေးစရာက မင်းအကြောင်းကလွဲလို့ ဘာရှိနိုင်သေးလဲ နွယ်နီ..”
“ဟင်.. ညီမအကြောင်း.. မတွေးပါနဲ့ ကိုကြီးရယ်.. ညီမအကြောင်းက ကောင်းတာသိပ်မရှိလို့ ညီမကိုယ်တိုင်တောင် မတွေးပဲမေ့ထားတာကြာပေါ့ ..”
အဲကွန်းခန်းဖြစ်နေသဖြင့် သူ၏ ဆေးလိပ်ငွေ့ကြောင့် နွယ်နီ့ကို စိတ်အနှောင့်အယှက် မဖြစ်စေလိုသဖြင့် အပြင်ထွက်ဆေးလိပ်သောက်ရန် ဦးချမ်းသာအောင် ထလိုက်သည်..
“ရပါတယ်​ ..ကိုကြီးရဲ့.. ဒီမှာပဲ သောက်ပါ..”
“ရပါတယ်​.. ကိုယ် အပြင်မှာပဲ သောက်လိုက်မယ်.. “
သူမ၏ ခေါ်သံကြောင့် သူမကို ငုံ့ကြည့်မိသည်..
သူပြန်ထိုင်လိုက်ပြီး သူမမျက်နှာကို စိုက်ကြည့်လိုက်တော့ သူမမျက်နှာက ပုံမှန်ပင်..
“ဆေးလိပ်သောက်တဲ့ မိန်းမတွေကို ဘယ်လိုမြင်လဲ ကိုကြီး ..”
“ကွမ်းစားတဲ့မိန်းမတွေကိုတော့ မနှစ်မြို့ဘူး.. ကျန်တာ ပုံမှန်ပါပဲ..”
လက်ထဲတွင် ကိုင်ထားသော ဆေးလိပ်ဗူးနဲ့ မီးခြစ်ကို သူမအားပေးလိုက်သည်.. သူမက ဆေးလိပ်တစ်လိပ်ကို ထုတ်ယူပြီး မီးညှိရှိုက်သွင်းလိုက်ပုံက သေသပ်လှသည်.. ထို့နောက် မီးခိုးငွေ့များကို ညင်သာစွာမှုတ်ထုတ်လိုက်ပုံက ထူးခြားပြီး ကြည့်ကောင်းနေသည်..
အချစ် မုဒိန်း ( စ/ဆုံး )
လာထား … အာဘွား (စ ၊ဆုံး)